Olee otú ịnọgide na-enwe breeki usoro nke onwe loading ihe igwekota?
Mmezi ntuziaka maka breeki usoro nke onwe loading ihe igwekota: Onye ọ bụla ọkwọ ụgbọala nke onwe loading ihe igwekota enwetawo ọnọdụ nke nodding mgbe ụgbọala. Ihe a na-akpọ nodding bụ na breeki siri ike nke ukwuu, na-akpata mgbanwe mberede nke wiil ahụ Kwụsị, ahụ n'okpuru ...
Olee ụdị onwe loading loading igwekota dị mma?
Enwere ọtụtụ ndị nrụpụta nke igwe na-ebu ihe igwekota, na ngwaahịa dị iche iche dị mgbagwoju anya, nke na-eweta nsogbu maka ndị ọrụ ịzụta; 1. Iji ghọta arụmọrụ kwa nke onwe loading ihe igwekota, n'ihi na ihe atụ, anyị pụrụ ịhụ ihe ụdị engine anyị na-ahọrọ, ole ca ...
Excavator mmezi nke isii ndị a enweghị ike ime!
1. Ike taya ahụ dị oke elu Na usoro nke iji excavator, mmezi taya dị ezigbo mkpa. N'ikwu okwu n'ozuzu, enwere ike gbanwee nrụgide taya dịka nrụgide usoro igwe na mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri mgbe ọnọdụ okpomọkụ dị mma. Agbanyeghị, nrụgide ọkọlọtọ abụghị ...
Kedụ maka ihe ịtụnanya nke “nodding” na haịdrọlik cylinder nke excavator?
Usoro nyocha nke hydraulic cylinder nodding in excavator 1. Mgbe hydraulic cylinder nke excavator boom "nods" mgbe ebuli, họta otu hydraulic nkịtị (dịka bọket cylinder) iji dochie ụzọ mbata mmanụ na ịlaghachi ọkpọkọ nke abụọ cylinders. N'oge a, rụọ ọrụ ...
Gịnị kwesịrị ntị ka mgbe wheel loader engine na-arụ ọrụ?
1. Mgbe engine nke na-ebu wiil na-amalite, ọ dị njikere ịmalite mgbe nrụgide braking rutere nrụgide nchekwa, iji hụ na nchekwa braking n'oge ịkwọ ụgbọala. Ọ bụ uko Ọ bụrụ na nke mberede braking, pịa bọtịnụ nke mberede na-adọba ụgbọala breeki valvụ (button nwere ike na ...
Gịnị kwesịrị backhoe Loader-elekwasị anya mgbe nhicha?
A na-ejikarị Loader Loader arụ ọrụ na saịtị ndị na-ewu ihe. Maka ụlọ ọrụ ihe owuwu oge a, ọ bụkwa ọrụ m ịnwe ihe nrụpụta ihe dị ọnụ ala Ihe anyị nwere mmasị na ya bụ mmelite nke ngwa ngwa azụ na mbadamba mkpụmkpụ na iji mee ihe n'ọdịnihu, yana iji mee ihe mechara nsogbu na backhoe l .. .
Kedu ihe anyị kwesịrị ị paya ntị na mgbe anyị na-eji ụgbọ ala forklift?
Ihe ndị chọrọ nlebara anya mgbe ị na-eji gwongworo forklift gụnyere: 1. N'iji gwongworo forklift, elebara anya pụrụ iche maka ịkwụ ụgwọ batrị n'oge na nhazi nke batrị ahụ. Lezienụ usoro ahụ anya mgbe ị na-akwụ ụgwọ batrị nchekwa na-akwụ ụgwọ zuru oke n'enweghị ov ...
Kedu ihe ekwesịrị ị paida ntị na 4 Wheel Drive Forklift Truck engine?
4 wheel forklift truck nwere ike inyere anyị aka idozi ọtụtụ nsogbu njem, ọkachasị maka ụfọdụ okpokoro simenti, akwa, wdg. 4 wheel mbanye forklift ụgbọala na-ejikarị na-ewu saịtị na-ewu ụlọ na r ...
Otu esi belata ike oriri na-enweghị isi n'oge arụ ọrụ excavator
Nke mbụ, belata ike ida na-enweghị isi. 1. Ihe eji ya na nchedo nke ọkpọ oku na mufflers, tinyere iwepu coke site na muffler, mmezi oge nke ihe ndi mebiri emebi, odighi mkpa itinye igwe iyuzucha n’iru, odighi mkpa imecha nke onwe ya na ọkpọ oku ogologo, wdg. 2.Mee ...
Nkà na ụzụ bụ isi arụpụta ihe, igwe igwe igwe na-eme ya
Ọsọ nke injinịa China bụ ama ama n'ụwa, na igwe injinịa dị elu na-arụ ọrụ dị oke mkpa. WIK ụgbọala igwekota na-agbanwe agbanwe ihe mmepụta. Usoro oru oma na ọgụgụ isi na-eme ka mmepụta dị mfe ma dịkwa mfe. Nri, erikpu na mixgwakọta Mmiri ogwu nwere ike b ...
Gini mere ndi ji egwu onwe ha ji aru onwe ha
Mwepụta nke ihe ndị akpọrọ akpọrọ akpọrọ akpọrọ Concrete Mixing Machines emepeela ụzọ ọhụrụ eji eji ihe eji eme ihe maka obere ọrụ na nke obere, nke bara ụba ma dịkwa mma, na ọtụtụ obere ọrụ na ọkara zụtara ha n'ime ọrụ ahụ. N'etiti ọtụtụ ụgbọ mmiri igwekota nke onwe, igwekota igwekota a ...
Kedụ ka ndị ọrụ si ahazi ọrụ nke Ndị Na - ahụ Maka Ihe Ndị Na - eme Nweta Onwe Ha_How bụ otu ndị na - ejikọ ihe ndị na - eme onwe ha ihe?
1. Mgbe ebuputachara ebe a na-ewu ihe, wepuo ihe oriri ugbu a, kpochapu hopper, ma kpochapu uzo nke so na igwekota igwekota iji wepu ahihia na ihe ndi ozo na aru. Laa azụ Na ịla ebe agwakọta, 150—200L mmiri kwesịrị ịdị ...
Onye na-egwu ihe, Self Loading Concrete igwekota, Mini Wheel Ibu Ibu, Wụ Wheel Loader, Lokwụ Loader, Lw300kn Wheel Ibu Ibu,